Altai Massif: astaamaha, asalka, cimilada iyo noolaha kala duwan | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 07/04/2021 16:00 | Geology
Maanta waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah safafka buuraha ee ku yaal bartamaha Aasiya ee sida weyn loogu yaqaan halka ay tahay sida ay sheegeen Ruushka, Shiinaha, Mongolia iyo Kazakhstan. Waxay ku saabsan tahay Altai massif. Waxay ka tirsan tahay buuraha Altai iyo wabiyada Irtish, Obi iyo Yenisei. Waa dhul ay ka buuxaan khuraafaad iyo halyeeyo jiilba jiil u sii gudbinayey. Waqti ka dib waxay noqotay dhul dabeecaddu awood u yeelatay inay muujiso wax kasta oo ay awood u leedahay.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha, qaab dhismeedka iyo asal ahaan tirada guud ee Altai.
2 Asalka guud ee Altai
3 Xogta juqraafiyeed ee Altai massif
4 Cimilada iyo kaladuwanaanta
Waa masaajid ku yaal buuro ku yaal bartamaha Aasiya halkaasoo ay ku kulmaan Ruushka, Mongolia, Shiinaha iyo Kazakhstan. Waxaa jira jaranjarooyin ballaaran, jiqda taiga ah ee jilicsan iyo jilicsanaanta lamadegaanka. Waxaas oo dhami waxay ku soo ifbaxayaan quruxda qabriga ee meelaha dhaadheer ee barafka leh quruxda laconic ee tundra. Dejinta nidaamyada deegaanka ee ka jira aaggan ayaa ka dhigaya meesha mid aad u qurux badan. Waqti ka dib waxay noqotay meel caan ku ah dalxiisayaasha inay tamashle u aadaan.
Waa meel fidsan ku dhowaad 2000 kiilomitir oo u jirta waqooyi-galbeed illaa koonfur-bari. Sidaa darteed, Altai Massif wuxuu sameeyaa xuduud dabiici ah oo udhaxeysa dhulka oomanaha ah ee Mongolia iyo taiga hodanka ah ee koonfurta Siberia. Labada aag cimilo waxay abuuraan muuqaallo kala duwanaansho la yaab leh. Runtu waxay tahay in kala duwanaanta weyn ee muuqaalka muuqaalka ee ka jira Altai massif ay la mid tahay sidii aan u qaadaneyno bogagga buugaagta atlas geography.
Kaliya maahan muuqaalku inuu noqdo qurux si bini aadamku u booqdo, waa buulkeeda kumanaan nooc oo dhir iyo xayawaan isugu jira.
Asalka guud ee Altai
Waxaan arki doonnaa waxa asalka ah ee ay buurahani lahaayeen iyo isbedelka sanadihii la soo dhaafay. Asalka buurahan waxaa lagu laaban karaa xoogaga tectonic ee jira sababo la xiriira saxanka tectonics. Waxaan ognahay in taarikada tectonic ay kujiraan dhaqdhaqaaq isdaba joog ah sababo laxiriira qulqulka hawada ee gogosha dhulka. Tani waxay u oggolaaneysaa taarikada inay isku dhacaan oo ay soo saaraan safaf buur cusub. Xaaladdan oo kale, asalka Massada Altai waxaa lagu raadiyaa isku dhaca xoogagga tectonic ee u dhexeeya Hindiya iyo Aasiya.
Waxaa jira nidaam cillad weyn oo ka dhex socda aaggan oo dhan iyo Waxaa loogu yeeraa qaladka Kurai iyo qalad kale oo Tashanta ah. Nidaamkan oo dhan ee cilladaha ayaa sababa riixitaan ku yimaada qaabka dhaqdhaqaaqa jiifka ah, taasoo ka dhigeysa taarikada farsamo ahaan mid firfircoon. Dhaqdhaqaaqa dhagaxyada ku jira Altai massif waxay u dhigmaan badanaa granite iyo dhagaxyada metamorphic. Qaar ka mid ah dhagaxyadaas ayaa si aad ah kor loogu qaaday aagga cillad-darrada.
Asalka magaca massay Altai wuxuu ka yimaadaa Mongolia "Altan", oo macnaheedu yahay "dahab". Magacani wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in buurahani runti yihiin jawharad ka yaabisa qof kasta sababo la xiriira kala duwanaansho iyo qurux.
Xogta juqraafiyeed ee Altai massif
Waxaan aadeynaa koonfurta Siberia halkaas oo ay ku yaalliin sedex buurood oo waaweyn oo buuraha Altai ay taaganyihiin, oo ah dhul aad u wanaagsan sida dhul dabiici ah oo cajiib ah. Muuqaalladani waxay hoy u yihiin halka ugu sarraysa dhammaan aagga koonfurta Siberia ee loo yaqaan Mount Beluja. Waxay leedahay joog sare oo gaaraya 4506 mitir sidoo kale waxay caan ku tahay inay tahay goob hodan ku ah biraha. Buuraha koonfurta Siberia waxay ka dhashaa wabiyada ugu waa weyn bariga Ruushka.
Altai Massif wuxuu ku yaalaa bartamaha Aasiya, qiyaastii inta udhaxeysa 45 ° iyo 52 ° North latitude iyo inta udhaxeysa 85 ° iyo 100 ° Eastitude ee Greenwich, wuxuuna dhex fariistay inta udhaxeysa Ruushka, Shiinaha iyo Mongolia. Noocyada gargaarka ee hadda jira waa meelaha ugu sarreeya, meelo aan sinnayn oo dherer kala duwan ah, baloogyo iyo dooxooyin dhaadheer. Dhammaan gargaarkaan waa natiijada ka dhalatay is-beddelka cilmiga dhulka. Waana dhammaadka xilligii Mesozoic buuraha qadiimiga ah waxaa sameeyay Hercynian isku laabmay oo gabi ahaanba loo beddelay qalin.
Horeba Tertiary-ka, laalaabka alpine-ka ayaa ah midka dib u cusbooneysiiyay dhammaan buuraha, jabna kana soo saaray baloogyada kala duwan. Dib-u-cusbooneysiintan ayaa ka liidatay Quaternary, halka webiyada iyo barafku ay sameeyeen tallaabo adag oo nabaad guur ah.
Cimilada iyo kaladuwanaanta
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno dhinacyada ugu muhiimsan ee cimilada iyo kala duwanaanta kala duwanaanta 'Altai massif'. Sababtoo ah loolka iyo xaaladda bartamaha qaaradda weyn ee Eurasia, Altai massif waxay leedahay cimilo qalafsan oo leh astaamo cimilo dhexdhexaad iyo qaaradeed leh. Roobabkeedu waa gabaabsi iyo xagaa. Dhererka sidoo kale waa inuu ku xirnaadaa cimilada. Heerkulka diiran ee sanadlaha ah micnaheedu waa in ay jiraan qiyam u dhexeeya 35 darajo oo leh heerkul aad uga hooseeya 0 darajo xilliga jiilaalka iyo xagaaga oo uu ku dhaafi karo 15 darajo.
Cimiladan ayaa soo baxda dhir doog ah oo ka jawaab celisa. Kaymaha goglan, seeraha iyo geedaha jilayaasha astaamaha adag ee ka soo baxa Altai weyn, una dhow lamadegaanka Gobi. Hoos ka eeg aragtida mitirka 1830, dhaadhaca waxaa ku xarooday geedo kedar ah, larches, geedo iyo geedo geedo ah. Inta udhaxeysa kaynta iyo bilowga barafka waxaa jira dherer ah oo ku saabsan 2400-3000 mitir oo sare. Daaqa Alpine waxaa laga helaa aaggan oo dhan.
Dhammaan gobolka buuraleyda ah ee 'Altai massif' waa mid khuseeya maaddaama ay ka dhigan tahay khad kala qaybiya inta u dhexeysa wabiyada taga Badweynta Baasifigga iyo kuwa webiyada ah ee ku qulqula Badweynta Arctic Glacier. Laba ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan Aasiya oo dhan ayaa iyaguna leh halka ay ka soo baxaan: the Obi iyo Yenisei. Iyada oo ay taasi jirto, shabakadda biyo-raadinta runta ah ee aaggan oo dhan waxay ka kooban tahay durdurro ka yimaada harooyinka oo qabsanaya wareegyada barafka. Koorsadiisu waa mid aan caadi ahayn tan iyo markii buurta laga caawiyo.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto massif Altai, astaamahiisa iyo asalkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Altai Massif